लाचार श्रीमानको पत्र श्रीमतीको नाममा – मझेरी डट कम
धर्तीमा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो संघर्ष र प्रयासलाई सधैं जारी राख्छ ताकि उसको हत्केलाको पौरखमा बाच्ने अरु प्राणी खुसीसँग जिउने सहारा पाउन्। तर जिन्दगीमा उसलाई किस्मतले नै ठग्यो भने उसले के गर्ने? आखिर उसको यो संसारमा आफ्नी श्रीमती बाहेक अरु कोही साहरा हुदैनन्! लाचार विवस भएर श्रीमतीको नाम पत्र लेख्न बाध्य नै हुन्छन!!!…
रति, मैले मेरो सायद पूर्व कालमा कुनै पाप गरेको थिएँ होला । यसै कारण यो जन्मको जीवन मलाई अभिसाप जस्तै बनिरह्यो । मैले मेरा आँखाले भोलिका हाम्रा लाचारी दिनहरू देखिरहेको छु – हाम्रो अवस्था पनि भयानक हुनेछ । हे काल देउता तिमी त चोरीको कलामा त अति निपूर्ण छौ। मेरो बिन्ती छ हाम्रो जिन्दगीको अन्तिम प्रहरमा हाम्रो दुर्दासा नगरिदिनुहोला । हाम्रो जीवनमा धेरै दुख आए जीवनको अन्त्य सँगै होस् । पूनर्जन्मको साथ फेरि तिमीसँग मिलोस !
बाँकी फेरि जोड्दै जाउला …!
बागलुङ् – रेशा
3 thoughts on “लाचार श्रीमानको पत्र श्रीमतीको नाममा”
kbs September 4, 2010 at 6:55 am
अतिथि September 4, 2010 at 9:46 am
त्यो भौतिक सुख
अतिथि September 4, 2010 at 2:04 pm
तपाइँ हरु लाई धन्यबाद…!